ပလာတာကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ပရားတာ့စ်ကျွန်း (အင်္ဂလိပ်: Pratas Island) သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၏ မြောက်ဘက်ပိုင်း၌ရှိပြီး ထိုင်ဝမ်မှ ကောင်းရှုံ မြူနီစပယ်၊ ချီကျင်းဒိစတြိတ်အပိုင်တွင် ရှိသည်။ ဟောင်ကောင်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ရေမိုင် ၁၇၀ (ကီလိုမီတာ ၃၁၀၊ မိုင် ၂၀၀) ခန့်တွင် ဖြစ်သည်။ ၆၄ ဟက်တာ (ဧက ၁၆၀) ကျယ်သော ရေပြာအိုင်ရှိပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ အကြီးဆုံးသောကျွန်း ဖြစ်သည်။ တုံးရှာလေဆိပ်လည်းရှိသည်။
ပရားတာ့စ်ကျွန်း၌ ရေအောက်အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုပါသည်။ ပရားတာ့စ် ကျောက်ခတ်ကျွန်းဝိုင်း၊ မြောက်ဗာရက္ကာကမ်းစပ်၊ တောင်ဗာရက္ကာကမ်းစပ်တို့ဖြစ်သည်။ ကျောက်ခတ်ကျွန်းဝိုင်းမှာ ပရားတာ့စ်ကျွန်း၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် လခြမ်းကွေးပုံရှိနေ၏။ ကျွန်းအနောက်မြောက်ဘက်ရေအောက်၌ မြောက်ဗာရက္ကာကမ်းစပ်သည် ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၁၁ မီတာ (၃၆ ပေ) တွင် ရှိပြီး တောင်ဗာရက္ကာကမ်းစပ်မှာ ၅၈ မီတာ (ပေ ၁၉၀) တွင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်းအနောက်ဘက်တွင် ရေနံတွင်းများ အများအပြား ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခု၌ တုံးရှာကျောက်ခတ်ကျွန်းဝိုင်းအမျိုးသားဥယျာဉ်ကို ထိုကျွန်း၌ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက ၎င်းကျွန်းကို ကွမ်တုန်းပြည်နယ်ပိုင်အဖြစ် အဆိုပြုလျက်ရှိသည်။
↑ China to conduct major military drill simulating seizure of Taiwan-held island (14 May 2020)။
↑ Pratas Island (Approved - N) at GEOnet Names Server, United States National Geospatial-Intelligence Agency
↑ Pratas Islands Archived 2012-08-06 at the Wayback Machine., vm.nthu.edu.tw
↑ Pratas Island Airfield, Federation of American Scientists, www.fas.org
↑ Note that Woody Island, South China Sea in the Paracel Islands hasaland area of 210 ha, which is greater than Pratas Island's 240-64=176 ha. Also, the PRC's land reclamation activities during 2014 & 2015 have created an "island" of ~230 ha at Fiery Cross Reef.
↑ Nautical Chart 93006, National Geospatial-Intelligence Agency, via www.oceangrafix.com
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပလာတာကျွန်း&oldid=661070" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။